အခြားနည်းလမ်းများ - အခမဲ့နဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ။ | Linux မှ
အခြားနည်းလမ်းများ - အခမဲ့နဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ
အခြားနည်းလမ်းများ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုသိပြီးနှိုင်းယှဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ
ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ အချို့သော၏သတင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သိရန် ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်များ၊ လျှောက်လွှာများနှင့်ပလက်ဖောင်းများ) ထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှ ဘလော့များနှင့်လာသောအခါ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linuxကောင်းပြီ, ပို။ ပင်။
ငါတို့လိုဘလော့ဂ်များ၊ FromLinux, များစွာသောအခြားအကြား, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြသည် သတင်းရင်းမြစ် ဤဒေသများရှိနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်စူးစမ်းလိုကြသည် ကောင်းသောရွေးချယ်စရာ ဤလုပ်ငန်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ဆိုဒ်များရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နေသောပရိုဂရမ်များပေါ်တွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး စီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီမည်သည့်အရာများသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယနေ့လေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
အရင်တုန်းကပြောခဲ့တုန်းကငါတို့ဒီအချက်အပေါ်ယံအပေါ်ယံထိခဲ့တယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့အတိအကျမဟုတ်ပေမယ့်သူ အခမဲ့ဆော့ဝဲ application တရုတ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများ, ဒီသေးငယ်တဲ့ built-in နှိုင်းယှဉ် tool ကိုမှတဆင့်ဒီအလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်: စီမံကိန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ.
စိတ် ၀ င်စားသူများကိုမှတ်မိပြီးအလေးပေးသင့်သည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း, သင်၏အရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်:
"ORအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ် (FOSS) ၏အများသုံးလမ်းညွှန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးသောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကုဒ်နှင့်စီမံကိန်းများကိုရှာဖွေရန်၊ ရရှိနိုင်ပါက၎င်းသည်အားနည်းချက်များနှင့်စီမံကိန်းလိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုလည်းပေးသည်".
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဤစာဖတ်ခြင်း၏အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ကိုနှိပ်ပါ ယခင်ဆက်စပ် post:
1.1.1 အခမဲ့ CD
စပိန်ဘာသာဖြင့်ဤဆိုဒ်ဆိုဒ်အလွန်နည်းသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအသုံးအများဆုံးနှင့်သိဆုံး ၃ ခုမှာ -
အခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ အခမဲ့အစီအစဉ်များပါ ၀ င်သောဒဏ္websiteာရီဝက်ဘ်ဆိုက်။ ၎င်းသည်စပိန်ဘာသာမှဖြစ်ပြီး၊ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာများသို့မဟုတ်အလားတူအသုံးချပရိုဂရမ်များရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်၎င်းကိုကြီးမားပြီးကြီးထွားလာသောအရာများတွင်အမျိုးအစားများအဖြစ်ခွဲခြားသည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Catalog.
တစ် ဦး ဝင်သောအခါ အမျိုးအစား, ဥပမာ, ဂရပ်ဖစ် ပြီးတော့၌တည်၏ ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာများငါတို့အားလုံးကိုပြတယ် အလားတူ software ကို တူညီတဲ့လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်တယ်၊ တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနက်ရှိုင်းစွာသိရှိရန်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုပေးထားသည်။
(ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် developer များကွန်ယက်open source software ကိုတီထွင်သူများအတွက်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအဓိကပေးထားပြီးအဓိကအားဖြင့် online တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပါ ၀ င်သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောစီမံကိန်းများကိုလွယ်ကူပြီးပြည့်စုံသောစီမံခန့်ခွဲမှုပေးနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသော repositories နှင့် mailing list ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
ထို့အပြင်၎င်းတွင်ရှိသည် Software မြေပုံ ကြောင်းကဲ့သို့တူညီသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Catalog ဖော်ပြခဲ့သည် အခမဲ့ CD။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နှိပ်ရမည် အခင်းအကျင်းများ၊ မာလ်တီမီဒီယာ၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်အယ်ဒီတာများ၏အလားတူရလဒ်ရရှိရန် အခမဲ့ CD.
၎င်းသည်စီးပွားဖြစ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစပိန်ဘာသာစကားနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်လိုအပ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်အားရှာဖွေခြင်း၊ ဒီအဘို့, ဒါကြောင့်လည်းရှိပါတယ် Software လမ်းညွှန် အလွန်ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားအားဖြင့်ခွဲခြား။
သို့သော်မတူသည် အခမဲ့ CD y OSDN, ၎င်း၏စမတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်အလွန်ကောင်းစွာ။ ဒီတော့ ရှာဖွေရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ် လုပ်နိုင်တယ် ပိုမြန်နှင့်ပိုမိုထိရောက်။ ဤ site နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်မှာ၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (ထင်မြင်ချက်များ) နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် ပုဂ္ဂလိကတံခါးပိတ်နှင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ.
မှတ်ချက်ဖြေ - စပိန်ဘာသာမှာ၊ သေးငယ်တဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သေးသေးလေးတစ်ခုရှိသေးတယ် အခြားနည်းလမ်းအပိုင်း ဒီနှိုင်းယှဉ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုစပိန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးတယ်။ အောက်ပါကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် link ကို.
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင်ဆိုဒ်များအများအပြားရှိသည်။ အချို့ကိုလူသိများပြီးအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကသူတို့ကိုသာနည်းနည်းလေးပြောပြီးပြောမယ်၊ သူတို့ကသူတို့သိလာပြီးအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းပြီးအခမဲ့စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုစီးပွားဖြစ်၊ တံခါးပိတ်နှင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာများမှာ
အကောင်းဆုံး Open Source ကိုရှာပါ
ပိုကောင်းတဲ့ software ကိုအခြားနည်းလမ်းကိုရှာပါ
ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် software ကိုလမ်းညွှန်
Saashub - ဆော့ဗ်ဝဲအခြားနည်းလမ်းများနှင့်သုံးသပ်ချက်များ
မှတ်ချက်ဖြေ - အင်္ဂလိပ်လိုကွန်ရက်စာမျက်နှာအများစုမှာလက်စွဲရှာဖွေမှုတွေကိုအမျိုးအစားများအလိုက်၊
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဆော့ဗ်ဝဲအမျိုးမျိုးကိုအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလက်တွေ့ကျသောကွန်ရက်စာမျက်နှာများအကြောင်း «libres y abiertos»စီးပွားဖြစ်၊ တံခါးပိတ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆော့ဝဲများအတွက်စိတ်ချရသော၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » အခြားနည်းလမ်းများ - အခမဲ့နဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ
Firefox 82 သည်ဗီဒီယို၊ အရှိန်မြှင့်တင်မှုနှင့်အခြားအရာများတိုးတက်လာသည်
OpenPrinting သည် CUPS ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်၏လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်အလုပ်လုပ်သည်